Sintomy ny kinova vaovao an'ny Google Now Launcher ho an'ny Android 6.0 Marshmallow | Androidsis
Manuel Ramirez | | apk, About us, Android Version
Efa manana ny anarana vaovao ho an'ny fanavaozana vaovao ho an'ny Android, Marshmallow ity. Tamin'ny mora toy ny Lollipop, Google izao dia te-hanasarotra ny zava-drehetra amin'ny anarana sarotra tadidy kokoa noho ilay Lollipop izay nanome antsika betsaka hatramin'ny nanolorana azy ho Android L tamin'ny taona lasa tao amin'ny Google I / O 2014. Etsy andaniny, Android N amin'ny taona ho avy raha mifanaraka amin'ny drafitra ny zava-drehetra ary tsy mahita fahasimbana isika. Efa nilaza izy ireo tany, fa mety ho Android Nutella io.
Mihomehy ankilany, androany afaka mahazo ny APK ny kinova vaovao an'ny Google Now Launcher manatrika ao amin'ny topi-maso voalohany an'ny developer navoaka roa andro lasa izay ilay kinova vaovao 6.0 Marshmallow izay nandrasana hatry ny ela. Fotoana iray tsy manam-paharoa ho an'ireo izay tsy manana fitaovana Nexus ary te hianatra momba an'io kinova io ho an'ny Marshmallow miaraka amina fanovana vitsivitsy, toy io topi-maso fahatelo io azo alaina izao.
1 Android Marshmallow sy Google Now Launcher
2 Sary mivoaka amin'ny alàlan'ny Google Now Launcher
Android Marshmallow sy Google Now Launcher
Ny fahatongavan'ny fahatelo teo aloha ho an'ny mpamorona dia tsy midika fiovana lehibe ankoatry ny fikitika sasany noho ny iray hafa ao amin'ny UI ary ny fisian'ireo sary an-tsary sivy ho hita izany rehefa navotsotra ny Android 6.0 Marshmallow ho an'ity fianjerana ity izay mbola kely ny ho avy.
Ao amin'ity kinova vaovao an'ny Google Now Launcher ity dia tsy azo atao ny mahita zava-baovao amin'ny endri-javatra fa hoferana izany fanatsarana ny fahombiazana sasany amin'ireo kinova taloha, raha tsy izany dia tsy ho takatra amin'ny APKmirror ny fisiany. Toy ny Android 6.0, izay tonga mihoatra ny zavatra hafa rehetra hanatsarana ny zava-bitan'i Marshmallow, miaraka amin'ny Google Now Launcher avela hitovy isika ankoatra ny fanavahana.
Sary mivoaka amin'ny alàlan'ny Google Now Launcher
Ity no fidirana amin'ireo rindrambaiko mahafinaritra rehetra Nanaitra anay i Google tamin'ny sary zanabolana telo nikitika avo, vector telo ary tontolon'ny natiora.
Mba hidirana amin'ny fampidinana ny Google Now Launcher dia mila mandeha ianao avy amin'ity rohy ity ao amin'ny APKmirror.com. Ataovy ao an-tsaina fa tsy maintsy manana ny toe-javatra mety hahafahanao mametraka apps avy amin'ny loharano tsy fantatra amin'ny findainao, ka rehefa misintona ny APK ianao dia afaka mametraka azy mivantana amin'ny fahatsiarovanao ny fitaovanao.
Mifanaraka amin'ny telefaona Android 4.1 Jelly Bean na avo kokoa, milanja manodidina ny 14,5 MB. Ary araka ny nolazaiko, raha vantany vao tafapetraka ianao dia afaka miditra amin'ireo rindrambaiko efa nampidirina tao amin'ny Android 6.0.
Ho an'ny ambiny, kely fotsiny ny holazaina momba ny kinova Android vaovao noho ny dingana manaraka ataonao dia ny fandefasana anao manerantany, izay hiaraka amin'ny fisian'ny fitaovana Nexus roa vaovao, iray LG Nexus 5 ary ny iray hafa avy any Huawei. Fihaonana tsy azo ihodivirana iray ao anatin'ny taona hanana ny fanavaozana Android vaovao ary afaka miditra amin'ireo fitaovana Nexus sasany izay miavaka amin'ny fanavaozana voalohany toy izany alohan'ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » apk » [APK] Sintomy ny kinova vaovao an'ny Google Now Launcher mivantana avy amin'ny Android 6.0 Marshmallow
stressasa4 dia hoy izy:
ny pejinao dia manana olana amin'ny dokam-barotra dia tsy mamela ny fidirana amin'ny vaovao mandefa anao amin'ny fiarahan'ny BB
Valiny amin'ny stresasa4